Known Islam Association Myanmar: ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းအောင် နေထိုင်ခြင်းဆိုတာ..
ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းကောင်းနဲ့ နေထိုင်တယ်ဆိုတာဟာ ဘယ်လိုမျိုးပါလဲ?
မိမိရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမှုဆိုတာဟာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာနေရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ဉပမာ - “ငါက သူများပစ္စည်းမခိုးဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူမိသွားရင် ထောင်ကျမှာစိုးလို့ပါ” ဒါမှမဟုတ် “ငါကလိမ်မပြောဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လိမ်နေတာလူသိသွားရင် အရှက်ကွဲမှာစိုးလို့ပါ” - ဆိုတာတွေဟာ လုံးဝ မုသုံ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့အပြုအမူကို လူတွေဘယ်လို တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုသာ ကြောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ် ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းတယ် ဆိုတာဟာ ကိုယ့်စိတ်နှလုံးတွင်းမှာ ဤအရာကို မှန်တယ်လို့ခံယူထားလို့ ဒီလိုဆုံးဖြတ်တာပါ ဆိုတာမျိုးကို ပြောတာပါ။
အစ္စလာမ်သာသနာမှာ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းစွာနေဖို့ဆိုတာဟာ အင်မတန်ကို အရေးပါတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ တမန်တော် မိုဟာမဒ် (ဆွ) ဟာလည်း ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းအောင် နေထိုင်ခဲ့သူ တစ်ဉီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တမန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗုခါရီကျမ်းမှာ ယခုလို ဖော်ပြခဲ့တာရှိပါတယ်။
“တမန်တော် မိုဟာမဒ် (ဆွ) ဟာ နှုတ်လျှာကြမ်းတမ်းသူ မဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ မကောင်းပြောဆိုခြင်းလည်း မရှိဘူး။ ပြီးတော့ တမန်တော် မိုဟာမဒ် (ဆွ)ဟာ အခုလိုပြောဆိုလေ့ရှိတယ် - အမှန်တကယ် အသင်တို့ထဲမှာ အကောင်းဆုံးသူဟာ အသင်တို့ထဲမှာ အကျင့်စရိုက် အကောင်းဆုံးသူဖြစ်တယ်” (ဗုခါရီကျမ်း - ဟဒီးဆ်နံပါတ် - ၃၅၅၉)
ကိုယ်ကျင့်တရား အကျင့်စရိုက် မကောင်းတဲ့သူတွေဟာ တမလွန်ရောက်မှသာ ငရဲဒဏ်ခံရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အသက်ရှင်နေစဉ် အချိန်အတွင်းမှာလည်း သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ မကောင်းမှုတွေရဲ့ ဆိုးကျိုးကို ပြန်ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းသူတွေကိုတော့ အလ္လာဟ်က ကြီးမားသော အကျိုးခံစားမှုကို ပြန်ပေးမှာပါ။ ကုရ်အာန်မှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ယခုလို မိန့်ဆိုခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။
“မည်သူမဆို ကောင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါက မိမိအဖို့သာ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်မည်။ ထို့ပြင်မည်သူမဆိုမကောင်းမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါက ထိုမကောင်းမှု၏ ဆိုးကျိုးသည် သူ့အပေါ်တွင်သာ ကျရောက်ပေမည်။ သင့်အရှင်သည် အစေတော်များကို မတရားလုပ်တော်မူသော အရှင် မဟုတ်ပေ။” (ကုရ်အာန် - ၄၁း၄၆)
“ဧကန်စင်စစ် အသင် (တမန်တော်မိုဟာမဒ် ဆွ) အား ကတိပြုသစ္စာဆိုကြသူများသည် အလ္လာဟ်အား ကတိပြုသစ္စာဆိုကြသူများသာ ဖြစ်ပေသည်။……. မည်သူမဆို ထိုကတိသစ္စာကို ချိုးဖောက်ခဲ့ပါက ယင်း၏ဆိုးကျိုးသည် သူ့အပေါ်သာ ကျရောက်မည်ဖြစ်သည်။ မည်သူမဆို အလ္လာဟ်နှင့်ပြုထားသော ကတိသစ္စာကို ပြည့်ဝအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါမူ အရှင်မြတ်သည် သူ့အား ကြီးကျယ်သောအကျိုးကို မကြာမီ ချီးမြှင့်တော်မူပေမည်။” (ကုရ်အာန် - ၄၈း၁၀)
အဲ့ဒါကြောင့် လူသားတို့ဟာ အသက်ရှင်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းအောင် ပြုမူနေထိုင်ဖို့ဆိုတာ အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ အဲ့ဒါမှသာ ယခု အသက်ရှင်ကာလအတွင်းမှာရော နောင်တမလွန်မှာပါ မိမိတို့ဘဝကို အေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်မှာပါ။